OMPOMPO SINK LOKUHLAMBA (ISIKHOKELO ULTIMATE) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ompompo Sink lokuhlamba (Isikhokelo Ultimate)
Ompompo Sink lokuhlamba (Isikhokelo Ultimate)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela seepompo zokuhlambela zokukunceda ufumane eyona ilungileyo yokuphinda uyile kwakhona okanye iprojekthi yokulungisa kwakhona.
Ibhobho yokuhlambela ibaluleke njengalo naliphi na igumbi. Ngapha koko, zihlala zibizwa ngokuba zizacholo zegumbi lokuhlambela. Nangona inokuba yinto encinci kuyilo, inokubangela ifuthe kwinkangeleko ngokubanzi kunye nokuziva kwendlu yangasese. Umzekelo, ityhubhu yobhedu yakudala, inokunika ilizwe elidala ukuba livakale, ngelixa iipompo eziphezulu zinokuphakamisa imeko yokuhlambela elula kwindawo yokupaka.
Iipompo zangasese ziyafumaneka kuluhlu olubanzi loyilo, ukugqitywa kunye neentlobo. Ezinye zineempawu ezizodwa, ezenza ukuba zibenomdla ngakumbi. Ukukhetha ngamawaka kwaye iindlela zoyilo zinokuphela.
Ngobuninzi beempahla zokuyiloba zemipu zangasese ezikhoyo kwintengiso, ukukhetha eyona inokudideka. Ngaphambi kokukhetha iipompo zangasese, kubalulekile ukuba ube nombono ezimbalwa zeempawu zawo. Apha ngezantsi, sikunika isikhokelo sethu sokugqibela kwiipompo zangasese ukukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona ilungileyo kwikhaya lakho.
Iindidi zeefaucu zangasese
Iziko lokuseta itompu
Umngxuma ongaphantsi omnye ompompo
Udonga lwendonga lokuhlambela ngombhobho
Imibhobho yokubamba ibamba elinye
Amalungu Faucet Faucet
Ubungakanani Bombhobho Wendlu yangasese
Iindleko zeBlue Bath
Faucet Faucet Gqiba
Izipompo zeZinc zangasese
I-oyile ityabhile ibhafu yobhedu
Ibhobho yokuhlambela ngobhedu
Umbhobho wokuhlambela weChannel
Ibhobho yamanzi emnyama
I-nickel yokuhlambela i-faucet
Uyilo lwefaucet yolwandle kunye nezinto ezongezelelweyo
Umnqamlezo isibambo sokuhlambela
Itompu yangasese engenachuku
Ingxangxasi yamanzi faucet
Isitya sombhobho sokuhlambela sompompo
Ungayitshintsha njani itepu yeSink yokuhlambela
Ukukhetha uhlobo olufanelekileyo lwetampu kwindawo yokuhlambela kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo ngakumbi kuba intengiso inikezela ngamawakawaka okhetho. Yintoni le yenza ukuba idideke ngakumbi kwaye ibangele ukuba bahlelwe ngeendlela ezininzi-ukusuka kwindlela abajongeka ngayo, ukugqitywa kwabo, uhlobo lomsebenzi abawusebenzisayo, ubungakanani babo kunye noqwalaselo. Kodwa ukuba nombono kwiindidi zeetampu zokuhlambela kuya kunceda ukwenza lula le ngxaki.
Uhlobo loqwalaselo lwetompu lubhekisele kwifom yombhobho ngokubanzi-inani lamaqhekeza okanye iinxalenye elinazo, indawo emi kuyo izibambo kunye nenani lemingxunya efuna ukuba ifakwe kwisinki okanye ekhawuntareni.
Ngokwesiqhelo, iipompo zegumbi lokuhlambela zifuna ukubonelelwa ngemingxunya enye ukuya kwemithathu egrunjelwe isinki okanye ikhawuntari. Izibambo zompompo, kwelinye icala, zisusela kwisiqwenga esinye ukuya kwezimbini. Nazi ezinye zeyona ndawo zixhaphakileyo zokupompa:
Umbhobho wokuhlambela ophakathi - Jonga kwi IAmazon
Iseti yombhobho yenye yezona ntlobo zixhaphakileyo zeefompo zangasese ezikhoyo kwimarike. Iza kwisiqwenga esinye kwaye yenziwe ngespout kunye nesiphatho. Iziko lokuseta iimpompo linokuba neziqwenga ezibini okanye ezibini ezibekwe kwiyunithi enye yesiseko. Oku kuvumela ulawulo lwamanzi ashushu nabandayo.
Iipompo zegumbi lokuhlambela ezibekwe embindinizilungele izitya eziqhelekileyo kunye neesinki ezinemingxunya emithathu esemgangathweni. Zikwakudla ngokubhekiswa kuzo njenge-4 intshi yeziko lokuseta itepu ngenxa yokuba umlinganiso womgama phakathi kwemingxunya engaphandle ugrunjwe ngee-intshi ezine ngokwahlukeneyo (yiyo ke loo nto izibambo zikwahlukana nge-intshi ezine). Enye yeentlobo eziqhelekileyo zeziko lokuseta iipompo zibandakanya izibambo eziphindwe kabini kwisitya seesentimitha ezintandathu.
Uninzi lwabanini makhaya lukhetha indawo yokuseta itepu ngenxa yokulula kwayo - iza ngobungakanani obugqibeleleyo kwaye ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa. Yinto yokujongana neesinks ezininzi zokuhlambela kwaye iza ngeendlela ezahlukeneyo kwintengiso.
Umngxunya omnye ompompoza kwigumbi lokuhlambela
Umbhobho omnye wokuhambisa umbhobho wokuhlambela- Jonga kwi IAmazon
Iimpompo ezinemingxunya enye, njengoko igama layo lisitsho, idibanisa zombini ispout kunye neziphatho zokudibanisa kwiyunithi enye, efuna kuphela umngxunya omnye wokumba ukuze ufakelwe. Yenziwe ngesiqu esinye kwaye inokuba namanqanaba amabini okanye izibambo eziqhotyoshelwe kwispout esinye esivumela ulawulo lobushushu kunye nokuhamba kwamanzi. Impompo, nokuba inokuba ne-lever enye okanye ephindwe kabini, ukuba ifuna umngxunya omnye wokufaka, isabekwa njengombhobho omnye womngxunya.
Kwezinye iimeko, apho isinki inendawo evulekileyo yokuvula imingxuma emithathu, umbhobho omnye womngxunya unokuphinda usetyenziswe kusetyenziswa imodeli enesitya esikhulu esisezantsi esiza kugquma imingxunya engaphezulu. Olu hlobo lwetheyiphu yokuhlambela ilungile kwizitshisi ezincinci kwaye isetyenziswa ngokuxhaphakileyo kumagumbi okuhlambela amancinci, amagumbi okugaya kunye nendawo yokuhlambela.
Kanye njengeziko lokuseta iipompo, iipompo ezinemingxunya enye zithandwa ngabanini bamakhaya ngenxa yokulula kwazo kunye nokusebenza ngokulula. Kodwa kulula ngakumbi kwaye kulula ukuyifaka.
Ibhulorho yebrass yebhobho yokuhlambela - Jonga kwi IAmazon
Iimpompo zebhulorho sisiqwenga esinye setephu apho ispout kunye nelevers ezimbini zishiya isebe. Yaziwa ngebhulorho yayo njengoyilo, olu hlobo lwesibhobho sokuhlambela sinezixhobo ezibini ezahlukileyo zokulawula amanzi ashushu nabandayo, aqhagamshelwe kwispout embindini.
Ukuba ezi ndidi zimbini zangaphambili zokuntywila kwimibhobho yokuhlambela zifuna imingxunya enye neyesithathu yofakelo, kwelinye icala, ithumbu lebhulorho lifuna imingxunya emibini ebunjiweyo Indawo yokuphakama yokulala yangasese okanye utshone. Olu hlobo lwesitampu sokuhlambela sinyuka ngaphezulu kwendawo yokugezela okanye isinki, evumela ukufikelela ngokulula malunga nokucoca kunye nokugcina.
Eyaziwayo ngoyilo lwakudala, ibhulorho esetyenziswa rhoqo kwigumbi langasese kunye nesitayile sokuhlambela. Ihlala isetyenziselwaukuhla kweesinki.
Ngokungafaniyo neziko lokuseta itompu leyo yeyomnye umpompo wombhobho oza nesiseko, itepu yokusasazeka efanelekileyo yenziwa ngamacandelo amathathu ahlukeneyo abekwe ngaphezulu kwesinki yokuhlambela okanye i-countertop- ispout esiphambili kunye namanqwanqwa amabini ahlukeneyo afakelweyo icala ngalinye lokulawula amanzi kunye neqondo lobushushu.
(Jonga ukusasazeka kwetampu efanelekileyo yokuhlambela eboniswe- IAmazon )
Ngokubhekisele kufakelo, ukusasazeka kwetephu efanelekileyo kakhulu kufana neziko lokuseta itompu, kodwa umahluko kukuba ufuna imingxunya emithathu-enye kwisiqwenga ngasinye. Ngokwesiqhelo, le mingxunya igrunjwe kumgama oqhelekileyo wee-intshi ezi-8 kodwa inokuya kwii-intshi ezili-10 kude enye kwenye.
Iinxalenye zokusasazeka kweepompo ezifanelekileyo zihlala zikhulu kunezinye iintlobo zeepompo zokuhlambela. Ukusasaza iifompo ezifanelekileyo ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba ziindawo ezixhaphakileyo. Iinguqulelo ezincinci zokusasazeka kwetephu efanelekileyo, eyilelwe ukufakwa kwii-intshi ezi-4 ngokwahlukeneyo ibizwa ngokuba kukusasazeka okuncinci.
Olunye uphawu oluseta ukusasaza iipompo ezifanelekileyo ngaphandle kwazo zonke iintlobo zeepompo zokuhlambela kwigumbi lokuhlambela kukuguquguquka kwayo kunye nokuguquguquka ngokoyilo. Ngaphandle koqwalaselo oluqhelekileyo, ubeko lwesipompo esikhulu sokusasazeka kwesipompo kunye neziphatho zinokulungiswa kwaye zibekwe ngeendlela ezahlukeneyo. Ngaphandle kobume obuqhelekileyo obuchanekileyo, ungayifaka nangayiphi na indlela othanda ngayo, ivumela ukuba zisetyenziswe nakwizitshisi ezincinci zokuhlambela nakwiitafile. Umzekelo, eyona spout iphambili inokufakwa kwikona engasemva, ngelixa izibambo zombini zibekwe kwicala elinye.
Ukuba ujonge isitya sokuhlambela esinombonakalo ocacileyo kuso, ke olu lukhetho olufanelekileyo kuwe. Ukusasazeka kombhobho onokusetyenziswa kunokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo zokuyila igumbi lokuhlambela, nokuba yeyesiko, eyodidi, eyangoku okanye yanamhlanje
Udonga olungaphezulu lwemibhobho yamanzi yokuhlambela- Jonga kwi IAmazon
Iimpompo ezifakwe eludongeni, njengoko igama lazo lisitsho, ziqhotyoshelwe eludongeni ngokuthe ngqo kunokuba zifakwe ngaphezulu kwekhawuntala yokuhlambela okanye isinki. Olu hlobo lwesibhobho sokuhlambela luqhele ukusetyenziselwa uhlobo lokuntywila lwenqanawa, iisinki ezizimeleyo kunye nezitya zokuhlambela ezifuna ixesha elide. Ubude bodonga olunyuswe ngombhobho luhlala luye phezulu kwisitya ukuze amanzi akwazi ukuqukuqela ngokupheleleyo kungene isitya ngaphandle kokuchitheka. Ikwafaneleke kakhulu kwimiphezulu yeetafile ezinamacebo okudada okanye e-cantilevered.
Olu hlobo lwesitampu sokuhlambela yenye yeentlobo ezithandwayo ngoku ezisetyenziswayo kuyilo lwangaphakathi. Inkangeleko yayo ehlengahlengisiweyo, inkangeleko ecocekileyo kunye nokusebenziseka kwayo kuyenza ifaneleke kakhulu kwizindlu zangasese zangoku nezangoku. Unokufumana iipompo ezifakwe eludongeni ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba, izitayile, imibala kunye nobukhulu kwintengiso.
Ngaphandle kwe-aesthetics yayo yanamhlanje, enye yeenzuzo ezongezelelekileyo ezinokuboniswa ludonga lokuhambisa isinki yokuhlambela kulula. Ngolu hlobo lwesibhobho sokuhlambela, kulula ukugcina indawo ejikeleze isitya sakho sokuhlambela sicocekile. Akukho zimpompo ziphakanyisiweyo kumgangatho wesinki yakho yokuhlambela, yiyo loo nto kungekho dipozithi yecalcium kunye nokungcola okwakha ukuzikhathaza. Ngamanye amaxesha, itompu ekhwele ngaphezulu kwisinki okanye kwi-countertop ingena kwindlela yokucoca.
Kukho izinto ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ukhetha itampu efanelekileyo yodonga lokuhlambela. Ezi zezi (1) ubume bemibhobho ekhoyo kwiindonga zangasese, (2) iinkcukacha zomenzi ngobude obuchanekileyo bompompo, (3) ubukhulu besinki yakho.
Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga nokufumana udonga lokuhlambela eludongeni, qiniseka ukuba ubume bombhobho obukhoyo kwiindonga zakho zokuhlambela bunokuhlala, ukuba akunjalo, cinga ngokulungelelanisa kwakhona izinto ezijikeleze iindonga. Ngokubhekisele kufakelo, qaphela ukuphakama okufanelekileyo kunye nokubekwa ngokuchanekileyo njengoko oku kuya kunciphisa ukutshiza. Kwakhona, khetha itepu yentaba eludongeni ehambelana nobungakanani besinki yakho yokuhlambela. Ubude betephu kufuneka banele kwaye ispout kufuneka sibe ngaphezulu nje embindini wesitya. Xa ityhubhu ivuliwe, indawo emise kuyo amanzi kufuneka ibe ngasemva kwedreyini yokucoca kwaye ukucoca phakathi kwempompo kunye nomphezulu wesinki okanye isitya kufuneka ubenomlinganiso omncinci we-intshi enye.
Impompo yamanzi yimpazamo yenye yoyilo olukhethekileyo kuyilo lokulungiselela igumbi lokuhlambela. Ihleli ixesha elide, kodwa ifumene ukuthandwa kule minyaka idlulileyo.
Uyilo lwendabuko lweefompo zangasese zihlala zibandakanya umngxunya ophefumlelweyo apho amanzi ahamba khona okanye adlulayo, phantse ngokungathi akukho ntshukumo kunye namandla. Yile nto idilesi yombhobho wamanzi idilesi- njengoko iyilelwe ngendlela yokuba amanzi agalele ngelixa exelisa ukuhamba kwayo kwendalo.
(Jonga le faucet yamanzi IAmazon )
Impompo yempophoma yeyona ilungileyo kubanini bamakhaya abaceba ukufezekisa i-spa enje nge-ambiance njengoko amanzi esiwa ngobunono kuvulo olubanzi esenza umbono opholileyo kunye nesandi esizolisayo.
Imibhobho yokubamba engabodwa, ekwabizwa ngokuba ziimpompo zentsimbi enye, yenziwe ngespout esinye kunye nesiphatho esinye okanye iverver. Isinqe esinye, esinokuqhutywa ukusuka ngasekhohlo ukuya ngasekunene, silawula ukuhamba nobushushu bamanzi. Olu hlobo lwetheyiphu lunokuphakanyiswa kumgangatho wesinki okanye ngaphezulu kwetheyitha yokuthembela kwaye ludla ngokufuna umngxunya omnye wokumba. Iimpompo zokubamba ezizodwa azidingi ndawo ininzi kwaye zinokulingana kwindawo emalunga nee-intshi ezimbini ukuya kwezintathu ububanzi.
Ipompo yentaba yedreyini luhlobo lwesitampu sokuhlambela esifakwe ngokuthe ngqo ngaphezulu kwetheyitha yokuphambuka kwendawo yokuhlambela.
Yahlukile kwiimpompo ezibekwe kwindawo yokuhlambela ngokwayo okanye efakwe eludongeni. Ezi zihlala zinoyilo olunikezelweyo olulawula izinga lokuhamba kwamanzi kunye neqondo lobushushu.
Ifayiphu yokufefa yindlela entsha yoyilo yoyilo lwetephu. Ngokungafaniyo netompu yesiko apho amanzi akhutshwa khona kwisiporho esimile okwejikelezo, itepu yokufefa isebenzisa uhlobo oluthile lwespout apho amanzi aphuma khona kwipateni yoxande.
Ukwazi iinxalenye zompompo kuluncedo ngakumbi xa kufikwa kulungiso kunye nofakelo. Ngokufumana umbono wokuba ipompo yakho yokuhlambela isebenza njani, indibano ilula kakhulu kwaye iyakhawuleza. Apha ngezantsi sikunika isishwankathelo esikhawulezayo kumacala ahlukeneyo ombhobho wokuhlambela:
Iifompu zebhola ziluhlobo lwefowuni engenanto. Olu hlobo lwetephu inesiphatho esinye okanye isixhobo sokulawula amanzi ashushu nabandayo. Isiphatho esifanayo sisebenza ngokulawula uxinzelelo kunye nenqanaba lokuhamba kwamanzi-kuxhomekeke nje kwindawo obeka kuyo. Isiphatho seepompo zebhola sijikeleza sinyuke sihla kwaye sihamba sivela ngapha nangapha - icala ngalinye okanye indawo nganye iyangqinelana nolawulo lwayo.
Ibhokhwe etyhidiweyo inamalungu ahlukeneyo awileyo eyona ntloko iphambili, isiphatho kunye nebhola. Isibambo setephu yebhola silawula ibhola ejikelezayo, ekwaziwa njengendibano yebhola yebhola. Ifunyenwe ngaphakathi komzimba webhobho, ibandla lever lever lenziwe yinkqubo yemithombo kunye nothotho lweendawo zokungena. Xa iqhutywa, indawo ebekiweyo ngaphakathi kwebhola iyangqamana nezihlalo zokungena, ilawula ubungakanani bamanzi aqukuqelayo kwispout.
Iifompu zeediski zikwalilo negama labo. Olu hlobo lwetheyiphu lwenziwe ngediski ezimbini zodongwe ezicoliweyo. Iipompo zediski zinoyilo olutsha kunye nokwakha ixesha elide ngakumbi xa kuthelekiswa nebhola kunye neefompu zoxinzelelo. Nangona kunjalo, iyafana nakwibhokisi yamanzi njengoko ikwayinto engena-washer kwaye ineziphatho ezihamba zisiya ngapha nangapha nokunyusa. Umahluko kuphela kukuba iifompu zebhola zijikeleza ngokukhululekileyo, kodwa iifompe zediski azinakho ukuhamba ngokukhululekileyo.
Olunye uphawu oluphambili lwetheyiphu yediski ngumzimba wayo omkhulu wesilinda. Ibanzi ngokubanzi kunezinye iintlobo zeefompo ngenxa yokuba umzimba wayo uneediski ezimbini ngaphakathi. Ezi diski zaziwa ngokuba ziidiski eziphezulu nezisezantsi. Idiski esezantsi ihlala itshixiwe endaweni ngelixa idiski ephezulu ishukuma xa isiphatho sijikeleza. Xa ityhubhu ivuliwe, idiski ephezulu iyahlula ukusuka kwidiski esezantsi, kwaye umsantsa ophakathi kulapho amanzi adlula khona. Xa itepu ingasetyenziswanga, iidiski ezisezantsi neziphezulu zicinezelwe kunye kwaye zenze itywina elingangeni manzi-ukuthintela naliphi na ithontsi lamanzi ekuphumeni. Njengombhobho webhola, i-disc faucet luhlobo lwe-faheret engenanto.
Ukuba iibhombu zebhola ziqhutywa kusetyenziswa ibhola ejikelezayo, kwaye iipompo zediski zenziwe ngeediski ezimbini, emva koko iipompo zecartridge, njengoko igama lazo libonisa, zenziwe ngeCartridge. Iipompo zeCartridge zineentsimbi ezingenanto ngaphakathi komzimba. ICartridge ilawula ukuhamba kwamanzi - ivala amanzi kwimithombo eshushu nengqele xa ingasetyenziswa. Ngelixa itipu ivulwa, iCartridge ityhalelwa phambili kwaye ivule imigca yamanzi, ivumela amanzi ukuba ahambe ngokukhululekileyo. Ukulawula iqondo lobushushu, iCartridge ijikeleza kancinane, ibhloka nokuba kungena amanzi ashushu okanye abandayo. Olu hlobo lombhobho wokuhlambela awunasheya
Imibhobho yeCartridge inokuba nesiphatho esinye okanye ezibini. Isebenza ngokulula kakhulu, ngokulula nangokugudileyo kwaye akukho sidingo sokujikeleza izibambo ukuze ulawule ukuhamba kwamanzi. Kwiimpompo zekhathriji yokubamba enye, ukucima nokucima iswitshi kulawulwa ngokuhambisa isiphatho phezulu nasezantsi, ngelixa ubushushu buhlengahlengiswa ngokuhambisa isiphatho kwicala. Kulula ukusebenza kuneefompu zoxinzelelo.
Eyaziwa njengohlobo oludala lwendlela yokuhambisa itompu, itompu yoxinzelelo ifuna eyona migudu uyisebenzisileyo. Zonke iipompo zokucinezela zenziwe ngamacala amabini ahlukeneyo alawula amanzi ashushu nabandayo. Zisebenza ngokujika okanye ukujikeleza izibambo ngesandla - ziyikhulule ngokulula ukuze amanzi ahambe okanye uqinise ukumisa amanzi.
Ngokungafaniyo neentlobo ezintathu zeepompo ezikhankanywe ngaphambili, umpompo wokucinezela uxhomekeke kuma-washer ukuze asebenze. Izibambo zompompo woxinzelelo zidibanisa kwiindibano ezimbini zesiqu, enye kwisiphatho ngasinye, ezenziwe ngezikrelemnqa ezazicoca iiwasher. Xa izibambo zisebenza, ezi ndibano zeziqu ziyehla ziye esihlalweni sevalve, zisicinezele, yiyo loo nto ukumiswa kwamanzi kumisiwe. Kwelinye icala, i-washer iyaphakama kwaye uxinzelelo olusuka kuxinzelelo lususwe, ukuvumela amanzi ukuba ahambe nge-faucet.
Ayizizo zonke iintlobo zetompu ezisebenza ngayo yonke isinki, ke kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba itompu oyikhethayo iyakulingana nesinki sakho okanye isitya sakho. Ukwazi ubungakanani bemigangatho yemibhobho yamanzi yangasese kunye nezibonelelo zohlobo ngalunye ziyafumaneka xa ukhetha efanelekileyo kwikhaya lakho.
Nazi iimpendulo kwimibuzo ebuzwa rhoqo malunga nobungakanani betephu:
Ngaba zonke iifompo zangasese zilingana ngokulinganayo? Ubungakanani beepompo zangasese ziyahluka. Xa sisithi ubungakanani bethumbu, oku kuhlala kubhekisa kubude bayo. Ukuphakama okusemgangathweni kweefompu zangasese ukusuka kumyinge we-intshi ezi-3 ukuya kwii-intshi ezili-13. Ngokwexesha lobude, iipompo zangasese zihlala zii-intshi ezili-12-16 ubude.
Uthini ubungakanani bemingxunya yemibhobho yamanzi esemanzini? Uhlobo lwetheyiphu yokuhlambela oyisebenzisayo iya kugqiba inani leemingxunya ezifanele ukubethwa kwisinki yakho okanye kumampunge. Imigangatho yemibhobho yamanzi esemgangathweni inokuba yindawo ekubanzi kuyo, ukusasazeka ngokubanzi okanye umngxunya omnye. Inani lemingxunya lisusela kwi-zero, inye, zimbini kwaye zintathu-zero kwiindidi ezixhonywe eludongeni, enye yeepompo zokuhlambela ezinemingxunya enye, kwaye emithathu kwabo banezibambo ezibini.
Iimpompo zangasese eziqhelekileyo kunye neempompo ngokubanzi zifuna umngxuma onobubanzi obuncinci beemilimitha ezingama-22. Isampuli ezisebenza ngombhobho kunye neepompo zokuhlambela ezingenachuku, kwelinye icala, zifuna ukubonelelwa ngemingxunya enobubanzi obuziimilimitha ezingama-28 kwisinki okanye kwikhawuntara yamampunge. Ngamanye amaxesha umngxunya ongangeemilimitha ezingama-25 ungasebenza kwiimodeli ezithile ezingachukumisiyo. Iimpompo ezinomngxunya omnye ezihlala zibandakanya umxube we-monobloc odibanisa zombini amanzi ashushu nabandayo kwisiqwenga esinye, uhlala efuna umngxunya wokugrumba weemilimitha ezingama-32 ububanzi.
sisiphi isandla sokunxiba umsesane womtshato
Ukusasazeka okusemgangathweni okanye umlinganiso opheleleyo womgama phakathi kwemingxunya esinkini okanye kwindawo yokulinganisa engento isusela kwii-intshi ezine ukuya kwii-intshi ezi-8. Kwiipompo ezinepleyiti enye, yabela ubuncinci iisentimitha ezi-6 zesithuba yoyilo. Iipompo zangasese ezinamalungu ahlukeneyo kunye neziqwenga ziya kuthatha ubuncinci i-intshi ezi-3 ukuya kwezi-4 zomgama phakathi kwento nganye- intsingiselo, ii-intshi ezi-3 ukuya kwezi-4 phakathi kwesiphatho samanzi abandayo kunye nesiporho esikhulu, kunye nee-intshi ezi-3 ukuya kwezi-4 phakathi kwamanzi ashushu isiphatho kunye nespout esiyintloko.
Imigangatho yeepompo ezisasazekileyo zilinganisela phakathi kwe-8 ukuya kwi-16 intshi kumbindi
Uyilinganisa njani ipompo yesinki yokuhlambela? Xa ulinganisa itampu yokuhlambela, qaphela iisentimitha kumgaqo osisiseko, intsingiselo, umlinganiso womgama uthathiwe ukusuka embindini ukuya embindini wemingxuma esinkini okanye kwikhawuntari yamampunge.
Umzekelo, ukuba isinki yakho yokuhlambela inemingxunya emithathu egrunjiweyo, linganisa umgama ukusuka embindini womngxunya ongasekhohlo ukuya embindini womngxuma ongasekunene. Inani elisiphumo liya kuchonga uhlobo lwetephu oya kuyisebenzisa. Isikhokelo esikhawulezayo siya kuba:
Umgama ongaphantsi kweesentimitha ezi-6 = iziko, ukusasazeka okuncinci okanye i-4 intshi yokusasaza itepu
Umgama weesentimitha ezi-6 nangaphezulu = ityhubhu ebanzi, i-8 intshi yokusasaza itephu
Ithetha ntoni i-4 intshi yeziko? Uninzi lweefompo zokuhlambela kwindawo yokuhlambela zihlala zibizwa ngokuba zii-intshi ezi-4. Oku kubhekisa nje kumlinganiso womgama phakathi kwezibambo zompompo. Ii-intshi ezine zeendawo zokuhlambela kwindawo yokuhlambela zifuna imingxunya emithathu, ebhijelwe nge-intshi ezi-4 ngokwahlukeneyo. Olu hlobo lwetheyisi lukwabizwa ngokuba yifomathi yokuhlambela encinci.
Umgama wemingxunya ye-4 intshi yeziko lokuhlambela ngamanzi ulinganisa iziko ukuya embindini-okanye phakathi kwamanqaku embindi emingxunya emibini yangaphandle kwisinki okanye kwikhawuntari yamampunge.
Yintoni i-8 intshi faucet esasazekayo? I-8 intshi yokusasaza itepu luhlobo lwetheyiphu yokuhlambela eyenzelwe ukuba isetyenziselwe iisinki okanye izinto zokubala ezinamampunge ezinemingxunya emithathu esekwe ngaphambili enee-intshi ezisibhozo ngokwahlukana. Imingxunya emithathu yeyokufaka iziqwenga ezithathu - itephu kunye neziphatho ezishushu nezibandayo.
Ngokubanzi, iipompo zegumbi lokuhlambela azibizi mali, kwaye ngethamsanqa, nditsho iindleko eziphakathi zokufaka kunye nokufaka iipompo zangasese ziphantsi. Nokuba ungeze enye yeprojekthi entsha okanye ubeke endaweni yesiqhekeza esidala, uthathwa njengomsebenzi olula ofuna umgudu omncinci kunye nezixhobo, ngenxa yoko akunakubiza malini. Ngenxa yokuba iipompo zokuhlambela zingabizi, abanye abaninikhaya bakhetha ukuzitshintsha qho emva kweminyaka emihlanu okanye njalo.
Ixabiso eliphakathi leepompo zokuhlambela ziphakathi kwe- $ 100 ukuya kwi-200 yeedola kuhlobo lwesiko. Kodwa ukhetho olongeze amanqaku, ukugqitywa okukhethekileyo kunye noyilo olucokisekileyo ngakumbi, ngokuqinisekileyo, luzakukubuyisela umva kancinci, uwele phakathi kwe- $ 200 ukuya kwi- $ 300. Ngokubanzi, iipompo zegumbi lokuhlambela zibiza imali encinci kuneebhitethi zasekhitshini, zombini izinto kunye nokufakwa ngobulumko.
Iindleko ngokuxhomekeke kuhlobo, uphawu, ukugqiba kunye neempawu
Kukho iintlobo ngeentlobo zeefompo zokuhlambela ezikhoyo kwimarike, zahlulwe ngokohlobo lwazo, indlela, izinto, ukumisela, ukugqiba kunye nenqaku. Izinto zokohluka kakhulu-ukusukela kwizinyithi, iialloys ukuya kwiplastikhi. Inye yale nto ichaphazela amaxabiso ombhobho wokuhlambela. Nanku ukujonga kwixabiso eliphakathi leepompo zangasese zodidi ngalunye:
Iindleko kuxhomekeke kuyilo
Iipompo zokubamba ezinqamlezileyo-Ukuphatha iipompo zokuhlambela umnqamlezo zezo zinto zibonisa uyilo lwe-X. Oku akubizi kwaye kuxabisa ubuncinci beedola ezili-10, nangona kunjalo, iimodeli zokugqibela eziphezulu zinokuya kuthi ga kwi-900 yeedola.
Uhlobo lwebhanti yombhobho - Uhlobo lweqhina luyilo oludala lweepompo zangasese kwaye ixabiso lalo lihamba phakathi kwe- $ 10 kunye ne- $ 150.
Uhlobo lwe-lever faucet- Iibhanti zohlobo lwe-lever zibiza ubuncinci be-30 yeedola kwaye zinokuya kwi-200 yeedola, kodwa usengafumana ukhetho oluphezulu oluphethe izibambo ezizodwa kwaye ixabiso labo linokuya kufikelela kwi-1 000 leedola.
Iimpompo zegumbi lokuhlambela iJoystick - Iimpompo zeJoystick zinoyilo olulula kunye nohlobo lwamaxabisoukusuka $ 50 ukuba $ 400.
Amaqhosha okucofa iqhosha lokutyhala - Ngenxa yobunzima bokufaka iifompu zeqhosha lokutyhala, olu hlobo lwetheyiphu yokuhlambela ibiza ngaphezulu kunezinye kwaye zihlala zinendleko ezincinci ze- $ 100.
Umpompo ongenamhlaba wokucoca ngaphandle komgangatho -Umgangatho ophakamileyo kunye nokuyila, iipompo zokuhlambela ezingachukunyiswayo kumgangatho ophezulu weepompo zangasese kunye nexabiso lazo liqala kwi- $ 150.
Iindleko ngokuxhomekeke kuhlobo kunye noqwalaselo
Iipompo zebhulorho -Iipompo zebhulorho zibiza ngaphezulu kwezinye iintlobo zetheyiphu ngenxa yoyilo lwayo olucokisekileyo. Ixabiso layo linokuqhuba naphi na ukusuka kwi- $ 200 ukuya kwi- $ 300.
Iimpompo ezixhonywe eludongeni - Iimpompo ezifakwe eludongeni zibiza kakhulu kuneefomathi zohlobo lomgangatho kwaye zihlala zibiza i- $ 200. Kuba ziyinkimbinkimbi ukufakela, iipompo ezixhonywe eludongeni zikwabangela iindleko zomsebenzi kunye neendleko zezinto ezibonakalayo, ngakumbi xa kufikwa kumba wokulungisa imibhobho yamanzi ukuze ikulungiselele.
Iindleko kuxhomekeke kuhlobo
Kukho amakhulukhulu abavelisi betepu yokuhlambela kwimarike kwaye ezi ntlobo zinokuthi zihlelwe zibe kwisiphelo esisezantsi, phakathi kuluhlu kunye nokukhetha okuphezulu. Nazi ezinye zeempawu ezithandwa kakhulu kwiifompo zokuhlambela kunye nexabiso labo eliphakathi:
Akunantanga: $ 15 ukuya kwi-200 yeedola
Inkulumbuso Faucet: $ 25- $ 200
Ixabiso: $ 50 ukuya kwi-400 yeedola
I-Kokols USA: $ 50 ukuya kwi-400 yeedola
Imidaniso: $ 50 ukuya kwi-600 yeedola
UHansgrohe: I-100 ukuya kwi-2,000 yeedola (uluhlu oluphezulu)
Iindleko ngokuxhomekeke kwizinto eziphathekayo kunye nokugqiba
Ukugqitywa kunye nombala webhobho yokuhlambela nayo idlala indima ephambili kwiindleko zayo. Ukugqitywa kukwamisela ukwakheka kwezinto kumbhobho, oko ke kuchaphazele ixabiso lawo xa lilonke. Nanku ukujonga kumaxabiso aphakathi eepompo zangasese esekwe kugqityiwe nakwizinto zabo:
I-Chrome: $ 5- $ 2,000 (ixabiso elincinci kuzo zonke iifompo zangasese)
Ibronzi: $ 10- $ 900
Umnxeba: $ 10 - $ 2,000
Ibrass: $ 300- $ 1,000
Mnyama: $ 50- $ 500
Igolide: $ 500- $ 800 (eyona ibiza kakhulu kuyo yonke itephu yokuhlambela)
Iindleko Zokufakwa KweBhobho Yangasese
Umndilili weendleko zokufakelwa kweepompo zangasese, kubandakanya abasebenzi kunye nezixhobo zimalunga ne- $ 250, kuxhomekeka kwizinto ezininzi.
Umsebenzi - Ukuba uya kuqesha ingcali ukuba ifake itampu yakho yangasese, lindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 150 kunye ne- $ 450 kwimirhumo yabo. Umbhobho ogqiba umsebenzi kungaphelanga neeyure ezimbini uya kuhlawula i-200 yeedola ngokomndilili. Asie kwindleko zabasebenzi, zikho nezinye izinto ezinokuchaphazela iindleko zokufakelwa kwetampu yakho yangasese.
Nazi ezinye zeepompo eziqhelekileyo zokuhlamba ezifumaneka kwiimarike:
Insimbi engenasici yaziwa kakhulu ngenkangeleko yayo ebukhali kunye nobuhle obunenkalipho. Kodwa ayixabisekanga kuphela ngenkangeleko yayo kodwa nangokuqina kwayo okugqithileyo kunye nomgangatho ophezulu. Iimpompo zangasese ezingenasici ezingenanto zinokuba yeyona nto inzima kunxiba kuzo zonke izinto ezigqityiweyo. Ngokubanzi, intsimbi engenasici ilunge ngakumbi kune-chrome malunga nokumelana nokunyamezelana. Inenkangeleko yesitayile efanelekileyo efanelekileyo yangoku kunye neyangoku yangoku.
Eziluncedo: Ukuba nakho ukugcina ukubonakala kwayo iminyaka, iipompo zensimbi ezingenasici ezingenanto zinokubola kunye nokugqwala. Nangona kungenakuthintelwa ngokupheleleyo kwibala, ukugcinwa kulula kwaye nayiphi na indawo yamanzi okanye amanqaku angacocwa ngelaphu. Inokuphotywa lula kwaye ibonakaliswe ukuba icocekile kakhulu.
Bendlela: Iipompo ezingenasici ezingenanto azibonelelwa ngabo bonke abavelisi betephu kunye nabo bazithengisa ngexabiso eliphezulu. Ngokubanzi, iipompo zensimbi ezingenasici zibiza ngaphezulu kweefomethi zangasese ezine-chrome, emnyama, emhlophe okanye yobhedu. (Jonga ithumbu elifanayo lesinyithi IAmazon )
I-Zinc luhlobo lwesinyithi sesinyithi, esenziwe ngokudibanisa i-tin kunye nelothe. Ngokwenkangeleko, iipompo zezinki zangasese zinenkangeleko ekhanyayo kunye nombala ofana nentsimbi engenasici. Olu hlobo lokugqibela lokugcina itephu yombhobho yokuhlambela ilungele uninzi lwezitayile zangaphakathi zangasese kodwa lusebenza ngokugqibeleleyo kwigumbi lokuhlambela langoku nelangoku.
Iinkonzo: Iipompo zeZinc ziphakathi kwexabiso elincinci lokugqibela kwiipompo zokuhlambela. Ukuba usebenza kuhlahlo-lwabiwo mali iprojekthi yokulungisa igumbi lokuhlambela , iipompo ze-zinc zinokugcina imali eninzi.
Umxhasi: Nangona iipompo ze-zinc zingabiza kakhulu, zincinci kakhulu. Ayisiyonyani ibala, ayisiyo irusi ubungqina kwaye iyonakala xa idibana namanzi. Nje ukuba ukuphela kwesingxobo kuphele, iipompo ze-zinc kufuneka zitshintshwe. Ke ukuba ujonge itampu yokuhlambela enokumelana nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla, ayisiyiyo eyona nto unokukhetha kuyo.
Ukuba ujonge indawo yokugqiba ithumbu lokuhlambela ngenkangeleko yemveli kunye nokuziva, ioyile yokuthambisa ioyile kukugqibezela kwakho. Ukuhleleka kwayo ngumdlalo ogqibeleleyo wezindlu zangasese ezinendawo yakudala. Ikwalungele ngokufanelekileyo neTuscan okanye iMeditera ephefumlelweyo ngaphakathi.
Iinkonzo : Iipompo zeoyile ezihlanjwe ngeoyile yobhedu yeoyile zinomgangatho owahlukileyo wobugcisa, ubenza ukuba ibe yeyona ndlela ilungileyo yokwenza i-nickel kunye ne-chrome egqityiweyo yentsimbi yokuhlambela Yomelele kakhulu kwaye kulula ukuyigcina kwaye icocekile njengoko ingabonisi nakuphi na ukuprinta kweminwe okanye ii-watermark.
(Jonga le oyile ityibilikisiweyo yobhedu IAmazon )
Uyilo olumkileyo, i-bronze yebrashi yebrashi kulula ukuyitshatisa kunye nezixhobo kunye nezinto zokuhlambela, ngenxa yoko kulula ukusebenza ujikeleze ngombala wombala wendawo yakho yangasese. Ingadityaniswa nezinye izinto zobhedu okanye inokusetyenziswa njenge-aksenti. Eyona nto ingcono zizinto zokugqitywa kobhedu ngeoyile, ngokubanzi, ziyafumaneka kwimarike. Ke ecaleni kwebhafu yokuhlambela, ungathenga amaqhina ekhabhathi yeklasikhi kwindawo yakho yokuhlambela kunye nepleyiti yokutshintsha ukukhanya ukuze umatanise ubuhle.
Umxhasi: Ukuphela kwempazamo yeoyile yokugcoba i-bronze yokugqibezela iipompo kukuba kuyabiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye izinto ezigqityiweyo ezinje nge-brashi nickel kunye ne-chrome.
Zimbini iintlobo zokugqitywa kobhedu kwiipompo ezikhoyo, ezizezi: (1) ubhedu olukhazimlisiweyo kunye (2) nobhedu lwesatin. Ubhedu olukhazimlisiweyo lolunye lwezinto ezigqityiweyo ezithandwayo kuseto lwakudala lokuhlambela ngenxa yegolide ekhanyayo engaphelelwa lixesha njengombala. Ihlala isetyenziselwa igumbi lokuhlambela elingaphakathi kunye nokujonga kweediliya kunye nokuziva. Ubhedu lwe-Satin kwelinye icala, inembonakalo efanayo engapheliyo, kodwa endaweni yokuba icwebezele inegolide esinebrashi efana nombala. Inenkangeleko ecekeceke ngakumbi kodwa inesimo sobuhle esifanayo nesinokuzisa iklasi eninzi kwigumbi lokuhlambela elingaphakathi.
Ubhedu olukhazimlisiweyo lokugqibezela iipompo zokuhlambela zilungelelene kakhulu kuseto lwakudala kunye nakwindawo yesiqhelo yokuhlambela, kodwa ikwahamba kakuhle nangaphakathi kwangaphakathi kunye nomxholo. Umlingane wayo we-satin ukwalungile ukuya kwigumbi lokuhlambela lendabuko, kodwa ngenxa yokujongeka kwayo, inokuba ngumdlalo ofanelekileyo kuseto lwanamhlanje nolwanamhlanje. (Jonga le faucet ithusi IAmazon )
Eziluncedo: Ukugqitywa kobhedu olugudileyo kuhlala ixesha elide kwaye ukubonakala kwalo okuqaqambileyo kwenza kube lula ukucoceka. Kwakhona kulula ukudibanisa nezinye izinto zokuhlambela, izixhobo zekhompyutha kunye nezixhobo. Kuba ithathwa njengeyona nto iyintandokazi ngalo lonke ixesha, iipompo zobhedu ezicociweyo kulula ukuzifumana kwimarike. Ukugqitywa kobhedu lwe-Satin nako kuzinzile ngokufanayo. Ngenxa yokubonakala kwayo kwe-matte, iminwe kunye neendawo zamanzi azibonakali kakhulu xa kuthelekiswa nokugqitywa okuqaqambileyo. Ikwasebenza njengombala omkhulu we-aksenti.
Umqeshi: Ukugqitywa kweefompu zokuhlambela zihlala zibiza kakhulu kunezinye izinto ezigqityiweyo, ezifana ne-chrome kunye ne-nickel ye-brushed, kodwa phakathi kweentlobo eziphosiweyo kunye ne-satin, ezi zilandelayo ziya kukubuyisela imali eninzi. Ngokungafaniyo neepompo zokuhlambela ngobhedu ezicociweyo ekulula ukuzifumana, iipompo zetyin zokugqiba igumbi lokuhlambela zilucelomngeni ukujonga kwimarike. Ubhedu lweSatin lukwanobunzima ngakumbi ukudibanisa nezinye izixhobo, izixhobo zekhompyutha kunye nezinto ezilungiselelwe zona.
I-Chrome yaziwa ngokuba sesona sigqibelo sithandwa kakhulu kwiipompo zangasese. Umbala wayo obukhali uyinika ukusebenza ngokuchaseneyo okuphezulu kwaye uyenze ukuba ifaneleke ngokugqibeleleyo kwizitayile zangaphakathi zangasese.
Eziluncedo: I-Chrome sisiphelo esinexabiso eliphantsi kwiipompo zangasese. Kodwa nangona kungabizi mali ininzi, ihlala ixesha elide kwaye kulula ukuyicoca. Unokufumana kwakhona iifomthi zokuthambisa zechrome ngokulula kwiivenkile zokuphucula ikhaya kunye nabavelisi. Njengoko sele kukhankanyiwe, ukusebenza kwayo ngokuchaseneyo okuphezulu kuyenza ifanelane ngokugqibeleleyo nasiphi na isitayile kunye nomxholo, kwaye kulula ukudibanisa nezixhobo, izixhobo zekhompyutha kunye nolunye ulungiso.
Umxhasi: Ngaphandle kokucoca ngokulula, enye into ebuyayo yompompo kwindawo yokuhlambela i-chrome ibonisa amabala amanzi kunye neminwe ngokulula. Ke ukuba ukhetheke kakhulu ngamanqaku kwaye ugcina i-sheen engenabala kwimpompo yakho, kuya kufuneka uyisule rhoqo ngoku (Jonga le faucet chrome apha IAmazon )
Ukugqitywa kombhobho wokuhlambela oqhubeka nokuthatha umphunga kule mihla kumnyama. Iimpompo zokuhlambela ezimnyama zihlala ziza kugqitywa matte.
Eziluncedo: Umnyama uhamba nayo yonke into, kwaye akukho mathandabuzo okuba le mpompo yokuhlambela iya kuhambelana ngokulula nayo nayiphi na iphalethi yombala kunye nesitayile. Ikwayinto eguquguqukayo kwaye inokuthi ihambe kakuhle nezinto ezininzi, izinto zokubala zokuntywila, izinto ezingento, izixhobo zekhompyutha kunye neziqendu ezivakalayo. Ukongeza, iipompo ezimnyama zangasese zinika i-class vibe kunye nengxelo ebhaliweyo. Isebenza ngokukuko kwigumbi lokuhlambela lanamhlanje kunye ne-eclectic, kodwa ngesitayile esifanelekileyo sompompo, inokuhamba kakuhle nangeendawo zokuhlambela zasekhaya zasefama.
Enye inzuzo yokusebenzisa iipompo zokuhlambela ezimnyama kulondolozo olulula. Umbala wayo omnyama unakho ukufihla iminwe kunye neendawo zamanzi.
Bendlela: Ngokungafaniyo nenye itepu yegumbi lokuhlambela egqityiweyo njenge chrome kunye nobhedu ekulula ukufumaneka kwimarike, ukhetho lweepompo ezimnyama zokuhlambela zinomda kwaye kunzima ukuzifumana. Ikwabiza ngaphezulu xa kuthelekiswa ne-nickel kunye ne-chrome. (Jonga le faucet emnyama IAmazon )
I-Nickel inombala omnyama kune-chrome kwaye lukhetho olufanelekileyo kubanini bamakhaya abakhetha ukugqibezela okuqaqambileyo kumbhobho wabo wokuhlambela. I-Nickel, ngokubanzi, inezinto ezimbini ezithandwayo ezigqityiweyo, ezixutywe kunye ne-polished. I-nickel ebrashiweyo inombala othambileyo wesinyithi kunye nembonakalo ecekeceke ngakumbi xa ithelekiswa neqabane layo elikhazimlisiweyo. Iipompo zokuhlambela i-nickel ezinamazinyo zingasetyenziselwa phantse nasiphi na isitayile sangaphakathi kwigumbi lokuhlambela nokuba lisenokuba lisiko, langoku okanye langoku.
Eziluncedo: Iipompo ze-nickel zokuhlambela i-faucet zibonelela ngamathuba amaninzi xa kufikwa kuyilo kuba inokudibana kakuhle phantse nawo nawuphi na umbala kunye nohlobo lwezixhobo kunye nokulungiswa. Ngaphandle kokungahambelani kwayo, uphawu olunye oluphawulekileyo lweepompo zokuhlambela i-nickel kukuqina kwayo okuphezulu.
izimvo zamanzi emva kwendlu
Xa kuthelekiswa ne-chrome, i-nickel iya kuhlala injalo kuyo yonke le minyaka, ingabonisi zimpawu zonxiba kunye nokugcina ukugqitywa kwayo kunye nokubonakala kwayo. Iipompo zangasese ze-nickel ezibrashiweyo nazo azibonisi amabala amanzi kunye neminwe ngokulula ngenxa yombala wayo. Nangona zibiza ngaphezulu kwe-chrome, iipompo ze-nickel zokuhlambela zihlala zingabizi.
Umxhasi: I-faucet ye-nickel yokuhlambela i-faucet inomdla wokudibanisa kunye nezinye izinto kunye nezixhobo, ngoko ke ukuba ufuna ukwenza isitatimende esinesibindi kwindawo yakho yokuhlambela, ke oku akunakuba yinto efanelekileyo. Kwakhona, ukuba ucwangcisa ukuyisebenzisa kunye neentsimbi ezingenasici, iipompo ze-nickel zokuhlambela aziyi kulungelelanisa kakuhle.
Apha ngezantsi luluhlu lweempawu zoyilo zemibhobho yokuhlambela kunye neempawu ezongezelelweyo:
Iipompo zokubamba ezinqamlezayo zezi zibonisa isiphatho esimile X. Olu hlobo lwetheyiphu ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa - vula nje amaqhosha amile x ukuvumela amanzi ukuba ahambe okanye awuyeke. Iipompo zokubamba umnqamlezo ziza kuyilo olunye kunye nolwesibini.
Iipompo zokuhlambela ezingenasiphelo zinobuchule kwaye zangoku. Olu hlobo lombhobho wokuhlambela ngamanye amaxesha lubizwa ngokuba yipompo ezenzekelayo,isivamvo setephu, itepu yokubonisa intshukumo, itepu engenazandla, itepu engenanto yokuphatha, itephu ye-elektroniki okanye iteyiphu ye-infrared. Kuqhelekile ukuba kufumaneke kwiindawo zangasese zikawonke-wonke, ngakumbi kwiihotele nakwizikhululo zeenqwelo moya.
Xa kuthelekiswa neepompo zesiko lokuhlambela ezifuna ukuguqula iqhina, i-lever okanye i-joystick ukuze usebenze, olu hlobo lwetheyiphu yokuhlambela isebenza ngaphandle kwesidingo sokuyichukumisa. Iimpompo zokuhlambela ezingachukunyiswa zixhotyiswe ngezisondezi ezikufutshane, zihlala zibandakanya izixhobo ze-infrared ezisebenzayo, ezifumanisa ubukho bezandla. Nje ukuba izandla zibethe izivamvo, zivula ngokuzenzekelayo iivalucu zompompo ukukhupha ukuhamba kwamanzi, kwaye ivale kwakhona iivalves ukuvala amanzi xa izandla zingasabonakali.
Uninzi lweepompo ezingenakuchukunyiswa zebhetri zisebenza ngebhetri. Olu luyilo lumele ukulawula nokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi kakhulu. (Jonga le faucet faucet apha IAmazon )
Yenzelwe ukulinganisa ukuhamba kwendalo kwamanzi, iimpompo zokuhlambela iingxangxasi ziyathuthuzela emehlweni nasezindlebeni. Olu hlobo lwetheyiphu luqhele ukusetyenziswa ukufezekisa i-spa njengokuziva usekhaya.
Ngokungafaniyo neendidi zemveli zepompo edla ngokuba nomngxunya ophefumlelweyo kwispout, iimpompo zamanzi zinokuvuleka okukhulu, zihlala zixande okanye zibunjiwe.
Iimpompo zeenqanawa ziimpompo ezinde ezenzelwe ngokukodwa ukuba zidityaniswe nezitya kunye nezitya. Olu hlobo lwetheyiphu icacisa umphakamo ophakamileyo wesinki yohlobo lwenqanawa Ukuphakama kwesitya sokuhlambela isitya sempompo ngokuqhelekileyo kusuka kwii-intshi ezi-4 nangaphezulu. Uninzi lweepompo zesitya sokuhlambela zibonisa into yokubamba elula eyenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa.
Ukongeza ekusebenzeni kwabo ngokulula, isitya sokuhlambela esipompo sikwakhangeleka sinobunkunkqele ngakumbi ngenxa yokuphakama kwabo. Ukufakelwa koomatshini bokuntywila ngesitya sokuhlambela nako kulula ngakumbi kuba uninzi lweesinki zesinki sele zinemingxunya eyombiweyo njengombonelelo.
Ukutshintsha ipompo yokuhlambela yinto elula yokumodareyitha kwaye inokwenziwa njengeprojekthi yokulungisa kwakhona i-DIY. Kungathatha phantse iyure ukugqiba umsebenzi kwaye kungabiza naphi na phakathi$ 60 ukuya kwi-160 yeedola. Jonga isikhokelo sethu esibanzi sendlela yokutshintsha itampu yakho yokuhlambela.
Ezinye izinto eziqwalaselwayo xa ushenxisa itampu yokuhlambela:
Ukufikelela kuyinkohliso ngakumbi xa ubuyisela itampu yebhafu yangasese xa kuthelekiswa nokufaka enye entsha kuba yeyokuqala, usebenza nekhawuntara esele ikho yokuhlambela kunye nesinki esele ikho endaweni, ke amathuba okuba, uza kusebenza phantsi kwekhabinethi kwaye indawo yakho yokusebenza ilinganiselwe.
Ukutshintsha ipompo endala ikwalixesha elifanelekileyo lokujonga ezinye iindawo kunye nezinto ezifakiweyo kwisitya sakho sokuhlambela, ke ukuba kukho naziphi na iityhubhu zokuhambisa amanzi ezindala nezinomhlwa, eli lixesha elifanelekileyo lokuzifaka endaweni yazo.
ulwandiso lwamanzi oluguquguqukayo (ezimbini ngetephu nganye)
Amanyathelo okutshintsha ipompo kwigumbi lokuhlambela:
Chonga uhlobo lombhobho onawo. Ukuchonga uhlobo olukhoyo lwetheyiphu onayo lelona nyathelo libaluleke kakhulu kuba uhlobo ngalunye lwetheyiphu ludinga izixhobo ezahlukeneyo kwaye luyahluka ngokofakelo. Ukuqonda uhlobo lombhobho onawo kuya kukunceda ufumane umbono wokuba uza kusebenza njani. Kananjalo, uphando olongezelelekileyo malunga nohlobo lwetephu yakho lungahamba indlela ende kwiiprojekthi ze-DIY ezinje.
Qaphela lonke unxibelelwano olukhoyo kunye nendawo onayo ngaphezulu nangaphantsi kwesinki yakho. Kwakhona, oku kuya kukunika isishwankathelo sendlela yokubeka yonke into kwiindawo zabo kamva.
Thenga itompu entsha ehambelana nohlobo lwetephu esele unayo. Ukuba unqwenela, ungahamba nohlobo oluthile lwetephu yamanzi yangasese, nangona kunjalo ukuthelekisa itephu yakho esele ikho kunye nohlobo olufanayo kuya kwenza ukufakwa kube lula njengoko kungasayi kubakho mfuneko yokulungisa imingxunya okanye ukubhola ezintsha. Unokusebenzisa eli thuba ukukhangela imigca yakho esele ikho eguqukayo yamanzi, imigibe yeep, isinki yokuhambisa amanzi kunye nokunye ukufakwa ukuze uphinde ungene endaweni yazo xa kufuneka.
Chitha indawo osebenza kuyo ngokususa zonke izinto ezingasentla nangaphantsi kwesinki yakho. Njengenyathelo lokuthintela, beka ibhakethi phantsi kwesinki yokuhlambela uze ubeke amadlavu phambi kokuba ususe itepu endala. Oku kuya kubamba nawaphi na amanzi aseleyo kamva xa uqala ukudibanisa.
Hlanganisa onke amalungu owafunayo. Emva kokukhetha kunye nokuthenga itompu yakho entsha yokuhlambela, lungisa yonke into oyifunayo. Hlanganisa onke amalungu afana nokufakwa kunye nezixhobo. Lungiselela ufakelo lweenkcukacha kwaye ujonge ukuba umgca wamanzi akhoyo uyahambelana na nompompo wakho omtsha. Ukugcina yonke into ikukunceda ukuba ugqibe umsebenzi ngokukhawuleza. Oku kuyakukugcinela nasekuthabatheni uhambo oluya evenkileni ngamanye amaxesha olubangela ukulibaziseka ukwenza umsebenzi.
Cima amanzi. Ukucima kunye nokucima igqwirha lokuhambisa amanzi kwisinki yakho yivalve encinci yodonga ephantsi kwayo. Yicime ukuthintela izikhukula kunye nokuthintela umonakalo ongaphezulu. Nje ukuba izivalo zivaliwe, vula itompu ukuze ususe nayiphi na ingcinezelo eseleyo.
Susa unxibelelwano lwamanzi. Sebenzisa utsalo oluhlengahlengisiweyo kwaye ujike ube sishukumiso sokujonga iwotshi ukukhulula unxibelelwano lwamanzi. Xa sele ukhululekile, ungasebenzisa isandla sakho ukusisusa ngokupheleleyo. Ungalibali ukubamba nawaphi na amanzi avuzayo ngebhakethi.
Susa zonke izixhobo ezikhoyo. Igumbi lokuhlambela elisebenzisa amanzi ngokungxama liqhelekile kusetyenziswa amandongomane kunye neewashi Ungazifumana zonke ezi phantsi kwesinki. Ngaphandle kwalokhu, i-clamp bolt ikwadityaniswa kulwandiso lwentonga yokukhupha amanzi. Susa zonke ezi zixhobo zikhona usebenzisa i-wrench ehlengahlengiswayo.
Khulula ulwandiso oluguquguqukayo lwetephu kwaye ulususe kumbhobho. Emva koko susa ulwandiso oluguquguqukayo kwivalve yokuvala. Khupha nayiphi na amanzi angaphezulu kwibhakethi
Susa yonke itepu yakudala, yakuba nje zonke izixhobo ezikhuselekileyo zisuswe, khupha kancinci itepu phezulu. Ukuba itepu ayishukumi ngokulula ngenxa yokubola okanye ukuba incangathi, zama ukufaka uxinzelelo ngakumbi xa uyiphakamisa. Unokufaka enye iWD40 ukuyikhulula.
Coca indawo ejikeleze itepu endala. Susa nayiphi na i-putty endala okanye i-silicone caulk usebenzisa imela.
Ukuhlekisa ukudibanisa itompu yakho entsha. Ukugculelwa kwindibano yetheyipu yakho entsha kuya kukunika ukubonwa okungcono kofakelo lwayo. Oku kuluncedo ngakumbi ukuba usebenza phantsi kwesinki kwaye izinto azibonakali.Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, gcina incwadi yakho ilungile kwaye ujonge kwaye uyijonge kwakhona njengoko kufuneka.
Faka itephu yakho entsha. Faka itepu entsha emngxunyeni kwigumbi lokuhlambela. Hlanganisa ngokwencwadana yemiyalelo. Ulungelelwaniso oluqhelekileyo ngaphezulu kwesinki iya kuba yimpompo, i-plumber's putty okanye i-gasket, emva koko isinki yayiza kuba yi-washer enkulu okanye isali kunye nenutanda ekhwela. Ukuba kukho imfuneko, thatha iqhekeza elincinci leplumber kwaye ulibumbe lube yintambo enobubanzi obuyi ¼ intshi. Faka isicelo se-putty ejikeleze isiseko sebhobho yamanzi kwaye uqinise i-nut kunye ne-washer ngaphantsi kwe-faucet usebenzisa i-wrench eguquguqukayo ukuyikhusela.
Qhagamshela izivalo zokuxuba.Ukuba usebenzisa itompu enomngxunya omnye, akukho sidingo sokudibanisa izivalo zokuxuba njengoko ziza kwisiqwengana esinye. Ngokwesiqhelo, eli nyathelo lenziwa ngokuqinisa i-nut enkulu kunye ne-washer evela ngaphantsi kwesinki yokuhlambela kunye ne-washer enkulu kunye nekliphu ngaphezulu kwesinki. Ungasebenzisa i-wrench ehlengahlengisiweyo ukulungelelanisa ukuqina kwamandongomane kunye neewasha. Qinisekisa ukubeka iiphini kwindawo efanelekileyo, kushushu ngasekhohlo kwaye kubanda ngasekunene.
Phinda uqhagamshele iityhubhu zonikezelo lwamanzi. Namathisela ii-hoses kumphandle wompompo. Elinye ithumbu liya kwivelufa yamanzi ashushu elinye liye kwivelufa yamanzi abandayo.Qinisa i-nut ngesandla ngokujika kwisindululo esihamba ngokwewotshi, emva koko uyigqibe ngesikrufu. Emva kokuba ii-hoses ziqhotyoshelwe kwimixokelelwane yompompo, zinamathele kunikezelo lwamanzi usebenzisa i-wrench ehlengahlengiswayo. Khumbula ukuba ungagungqi kunxibelelwano lwakho.
Phinda ufake intonga yokuhambisa umbhobho kunye nombhobho wokuhambisa amanzi. Phinda ufake intonga yokuhambisa amanzi kulwandiso ngokungasikhupheli i-pivot nut, ubeke intonga yokuntywila ngaphakathi emngxunyeni kwaye uqinise umva wenut. Emva koku, ujije kumbhobho wokuhambisa amanzi.
Vavanya itephu yakho entsha. Vula amanzi kwaye uvumele ukuba abaleke kangangemizuzu eliqela ukuze ubone ukuba akukho kuvuza na. Yenza naluphi na uhlengahlengiso oluyimfuneko ngokuqinisa uqhagamshelo usebenzisa utsalo oluhlengahlengiswayo.
Bukela le vidiyo ngendlela yokutshintsha ipompo yangasese:
Uyifaka njani i-Centerset Bathroom Faucet
Inqanaba lobunzima bokufaka itompu entsha kuxhomekeke kuhlobo lwetephu oya kuyisebenzisa. Kodwa kukhuselekile ukuthi ukufakela entsha kulula ngakumbi kunokutshintsha endala, kuba njengoko uninzi lwabantu lusithi ukususa itompu esele ikho ngamanye amaxesha kuthatha umzamo omkhulu.
Ungayidibanisa itephu yakho yokuhlambela ngaphambi kokufaka isinki yakho, ikhabethe okanye i-countertop, ekunika indawo eyongezelelweyo yokusebenza kunye nokufikelela okungcono kumazantsi esinki kunye nolwakhiwo lwemibhobho yekhaya lakho.
Izitya zokuhlambela zineentlobo ezahlukeneyo zoqwalaselo. Inani leemingxunya ezibiweyo kwisinki yakho yokuhlambela (isusela kwisinye ukuya kwemithathu imingxunya) ziya kukunceda ubone uhlobo lwetephu oya kuyidinga. Inokusetelwa ityhubhu enye yomjelo, iziko elinemingxunya emithathu, okanye itepu yokusasaza ebanzi. Impompo, qiniseka nje ukuba iyakulingana nezibonelelo ezikhoyo zeshishini lokuhlambela.
Kweli nqanaba ngesikhokelo samanyathelo, siza kukubonisa indlela yokufaka enye yezona mpompo ziqhelekileyo kwigumbi lokuhlambela, kumbhobho wetephu weziko.
Ithumbu (kunye namanye amalungu afakiwe)
Amanyathelo okutshintsha ipompo yeziko lokuhlambela:
Lungisa zonke izixhobo eziyimfuneko kunye nezixhobo. Ukulungiselela kuhlala kungundoqo ekusebenzeni nasekusebenzeni ngokukhululekileyo simahla. Khupha itompu yakho entsha kwaye ujonge ukuba zonke iindawo eziyimfuneko zigqibile na. Gcina incwadi yakho yemiyalelo ikufutshane njengoko uza kuyidinga kamva. Ukuba kukhona enyeUkuhlanganiswa kwangaphambili kuyadingeka, qhubeka nayo ngokwemiyalelo yesikhokelo. Ukudibanisa kunye nokufaka itampu yokuhlambela kulula xa usebenza nesinki yakho ujonge ezantsi. Okokugqibela, ngaphambi kofakelo, qiniseka ukuba ucoce umphezulu wesinki yakho okanye ilize apho itampu yakho entsha iza kuhlala khona. Unokwenza oku usebenzisa i-rag okanye ilaphu elithambileyo.
Fakela i-gasket yerabha kwipompo. Igasket sisiqwenga serabha okanye iplastiki ebekwe phakathi kwetepu kunye nesinki ukwenza itywina elingangeni manzi nokukhusela nakuphi na ukuvuza okanye ukuchitheka kokuphuma kwikhawuntari okanye ekonakaliseni iikhabhathi. Yibeke phantsi kwenxalenye engezantsi yetephu, uthelekise imingxunya kumacandelo etephu. Oku kulula kuba kuhlala nje kungena endaweni. Kwezinye iimeko, iipompo azize ne-gasket - ungasebenzisa i-putty ye-plumber okanye ufake umaleko omncinci wesitywina kumjikelezo wesiseko sompompo ngaphambi kokuyifaka kwisinki okanye kwimingxunya yetafile.
Songa isiphelo semibhobho yomsila wombhobho kunye nemisonto enomaleko wetape yombhobho. Iteyiphu yeplumber, ekwabizwa ngokuba yi-Teflon tape, iteyiphu emhlophe ebhityileyo, emhlophe esetyenziselwa ukuthambisa kunye nokutywina izixhobo zombhobho kunye nezinto. Qiniseka ukuba iteyiphu ayinweneli ngaphaya kokuphela kombhobho.
Faka itepu entsha kwimingxunya enyukayo yesinki. Ngononophelo setha itephu kwindawo entle kwaye utyhale isixhobo sentsimbi sombhobho kwimingxunya enyukayo egrunjelwe esinkini. Emva kokusetwa, qhafaza i-washer kwaye ujikeleze i-nut ephakamileyo phezu komgca. Yenza oku ngesandla ngokuhamba ngewotshi ukuze uyiqinise kwaye uyigqibe ngesitshixo esitshintshayo ukuze ukhuseleke ngokupheleleyo. Yenza into efanayo ngezivalo kunye nemibhobho yomsila - ziyiphose kwimingxunya yazo kwaye uziqinise endaweni usebenzisa utsalo olungelelanisiweyo. Kunqande ukubhukuqa amandongomane njengoko ukhusela itompo endaweni yayo njengoko kunokubangela umonakalo kwisinki sakho.
Qhagamshela umbhobho wokuhambisa amanzi okanye ityhubhu eguqukayo kwimixokelelwane yetephu. Okokuqala, qhoboshela ithumbu kumbhobho wempompo. Qinisa i-nut ngesandla ngokujika kwisindululo esihamba ngokwewotshi, emva koko uyigqibe ngesikrufu.
Qhagamshela umbhobho wokuhambisa amanzi okanye ityhubhu eguqukayo kunikezelo lwamanzi. Emva kokuba ii-hoses ziqhotyoshelwe kwimixokelelwane yompompo, zinamathele kunikezelo lwamanzi lwezivalo ezivaliweyo ezifumaneka eludongeni. Ngenisa ngobumnene iityhubhu eziguqukayo. Sebenzisa inkqubo efanayo ukuyiqinisa - jika amantongomane ngesandla ngokuhamba ngokujonga iwotshi kwaye uyigqibe ngesixhobo esitshintshayo.
Khanyisa itephu ukuze uyivavanye. Cotha kancinci itepu kwaye uvumele amanzi abaleke ukukhupha nayiphi na inkunkuma. Phinda ujonge ukuba ngaba itepu yakho kunye neendlela zokuhambisa zinako ukuvuza.
gcina umhla vs isimemo somtshato
Ezinye izinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe:
Esi sikhokelo silula ngumyalelo ngokubanzi wokufaka isitya sokuhlambela. Qinisekisa ukulandela imiyalelo kwincwadana enikezwe ngumenzi.
Izixhobo zinokunikezelwa ngepompo yakho entsha xa sele uzithengile. Yisebenzise ngobulumko njengoko inokukunceda ugcine ixesha kunye nomzamo.
Lumka ungaginyi ngaphezulu kwamantongomane kunye nezikrufu.
Ukuba uhamba nezinye iintlobo zetompu, qiniseka ukulinganisa ngokuchanekileyo umgama phakathi kwemingxunya efunekayo.
Ukufunda ngakumbi ngokwenza utyelelo ngokutsha Iingcamango zokuhlaziya iphepha apha.
I-VIGO VG05002BN 3 'H uThithu wokutshiza iNickel D… $ 128.80 umthengisi ogqibelele (116) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-DELTA Lahara Ibhafu esasazekileyo… $ 196.87 umthengisi ogqibelele (110) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-DELTA Windemere Ibanzi eliHlaziyiweyo… $ 139.31 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-231 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Delta Faucet 86T1153 86T I-Handle Mete ezimbini ... $ 135.10 umthengisi ogqibelele (102) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
igumbi lokulala laseParis
ndiyakuthanda ngayo yonke into endiyiyo
Ngubani owatshatisa umqeqeshi waseMeghan
ngubani omemayo kwizifundo zokuziphatha zokutya
yiringi yantoni eqhubekayo